အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ဧပြီ ၂၀၁၄ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ဧပြီ ၂၀၁၄
အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ဧပြီ ၂၀၁၄
Posted by kai on Apr 12, 2014 in Editor's Notes, Gay/Lesbian | 11 comments
လောကတွင်အဖို၊အမဟူ၍လိင်အရခွဲခြင်း၂မျိုးရှိသည်။ တိရိစ္ဆာန်များတွင်တော့ တီကောင်ကဲ့သို့လိင်အင်္ဂါ၂မျိုးတွဲနေသောသတ္တဝါတချို့ရှိသည်ဖတ်ဖူးပါသည်။ သတ္တဝါတခုတွင် ကျားမလိင်တွဲရှိနေပါလျှင် တိုးတက်ရာ၊စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အားပြိုင်ညှိခြင်းရှိမည်မဟုတ်ပေ၊
လူသားတွင် မိန်းမအင်္ဂါ၊ ယောကျင်္ားအင်္ဂါမပါသူကို “နပုန်းပဏ္ဍုတ်”ခေါ်၍ ၂မျိုးလုံးပါသူကို “ဥဘတောဗျည်း”ဟုခေါ်လေသည်။
ကျားနှင့်မ ၂မျိုးသာရှိသည်တွင် လူ့သမိုင်းယဉ်ကျေးမှုတလျှောက်ကျားနှင့်မကိုခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခြင်းခေတ်များရှိခဲ့ဖူးသည်။ ရှိနေဆဲဟုလည်းဆိုနိုင်သည်။
ရောမခေတ်တွင် စစ်ထွက်ယောကျာ်းများသည် မိန်းမများကိုခွဲခြားဆက်ဆံကြသည်ဟု ဖတ်ဖူးသည်။ ကလေးမွေးပေးနိုင်သောသတ္တဝါတရပ်အထိပင်စံထားသူများလည်းရှိပေသည်။ ထို့ကြောင့် ယောကျာ်းအချင်းချင်း လိင်ဆက်ဆံခြင်းထွန်းကားဟန်ရှိကာ ကျွန်မင်းစပါတာကတ်နှင့်စစ်မင်းအလက်ဇန္ဒားတို့၏ဘဝမှတ်တမ်းများက ဤအချက်ကို မီးမောင်းထိုးပြသည်ဟုဆိုချင်သည်။ ထိုခေတ်၏”ဂေး”ဟူသည် ယခုခေတ်နှင့်တွေးမြင်စဉ်းစားပုံ လုံးဝခြားနားမည်ဟုယုံကြည်မိပါ၏။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးက စစ်ထဲသွားနေသောယောကျာ်းတို့၏အလုပ်နေရာများကို မိန်းမတို့လုပ်ဖြစ်သွားရန်အတွက်တွန်းပို့ခဲ့သည်။ စစ်ကြီးပြီးခေတ်တွင်တော့ စစ်ကြောင့်လျှော့သွားကျသွားသော ကျားများနေရာအတွက် အစားထိုးဖြည့်ရန် ကျားကလေးငယ်အများစုသာ မွေးထုတ်ပေးရသော မိခင်များအဖြစ်ရောက်စေခဲ့သည်။ မိခင်များကြောင့်ပင် အမျိုးသားတို့ဤဒွန္နယာ၌ဖြစ်တည်ရှိကြသည်မဟုတ်ပါလော။
ကမ္ဘာ့ဘာသာကြီး၄ရပ်၏ ဥသျှောင်များတွင် ပုရိသများကိုသိပ်သည်းလျှက်တွေ့ရပေသည်။ ဘာသာကြီးတို့တည်ထောင်ရာ အစမူလနှစ်များတွင် စစ်နှင့်သူ၏ပဋိပက္ခများဖြင့်သာ ကစားရပေရာ အင်အားသုံးနိုင်သည့် ယောက်ျားများ အကြီးအကဲဖြစ်ရခြင်းသည် ယုတိ္တတန်၏။
ရှေးရောမနတ်ဘုရားများတွင် ပုရိသတို့အားကိုင်လှုပ်နိုင်သော ဣတ္ထိယများအကြောင်းဖတ်ရသလို ဟိန္ဒူနတ်ဘုရားများ၏ကြင်ယာတော်များအဖြစ် တန်ခိုးဣဒ္ဓိပါဒ်ထက်သောမိန်းမ/နတ်သမီးများရှိသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာတွင်လည်း ဧတဒဂ်ဆောင် ထေရီ၊ရဟန်းမ၊မိခင်၊ တော်ဝင်အမျိုးသမီးများရှိပါသည်။
ကျားနှင့်မတို့တူယှဉ်အားပြိုင်တည်ဆောက်လာခဲ့သော ယခုကမ္ဘာ့ခေတ်ယဉ်ကျေးမှုတွင် “မ”တို့၏ ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတို့ပြီးပြည့်စုံခြင်းမရှိသေးဟုဆိုနိုင်ငြား အမျိုးသမီးတို့၏ အခွင့်အရေးတာင်းဆိုမှုများကိုဖြတ်တက်လျှက် Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) ၏အသံတို့ကျယ်လောင်စွာထွက်လာပါသည်။ ဤရပိုင်ခွင့်တောင်းဆိုမှုတို့သည် ခြားနားလျှက်မှ ဆင်တူသည်။
ကွန်ဆာဗေးတစ်(ရှေးရိုးစွဲ)တို့၏ သံလက်ဆုပ်ဆို့ပြေလျှော့ဖြေကျစပြုလာပေပြီ။ အမျိုးသမီးတို့ နိုင်ငံရေးဇတ်ခုံတွင်သိသာစွာနေရာယူနိုင်ကြပေပြီ၊ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းရာထူးများတွင် မိန်းမများအားမြင်ကြရသည်။ LGBT တို့ရှေ့တန်းထွက်စကားပြောလာကြသည်။ သူတို့၏ခံစားမှု၊ ဖြစ်တည်မှု၊ အခွင့်အရေးရလိုမှုများကို သိသာထင်ရှားပြလာကြသည်။ လစ်ဘရယ်သမားတို့လက်ခမောင်းခတ်လျှက်ရှိကြကုန်၏၊
အမေရိကပြည်တွင် လိင်တူလက်ထပ်ခြင်းကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြု (၁၇)ပြည်နယ်ရှိကာ ကမ္ဘာတွင်မူ (၁၇)နိုင်ငံရှိနေပြီဖြစ်ပါသည်။
တိုင်းပြည်/လူသားတို့၏ စီးပွားတိုးတက်မှုကံကြမ္မာသည် လှိုင်းသဖွယ်အတက်အကျရှိသည်။
အမေရိကပြည်သည် လှိုင်းအတက်ဖက်တွင်ဆက်တိုက်ထိန်းနို်င်ခဲ့သည်မှာကြာပြီ။ Shumpeter Cycles အရ ကောက်ပြလျှင် ယခုခေတ်သည် ITဖြင့်”ပဉ္စမလှိုင်း”ဝင်လာသောခေတ်ဖြစ်သည်။ IT၊အင်တာနက်ကိုထီထွင်ပြီး ပစ္စည်းသစ်များထီထွင်ထုတ်လုပ်ရင်း ရှေ့သို့တွန်းပို့စေပြန်သည်။ နိမ့်တုံမြင့်တုံလောကဓံကိုဖေါက်၍ အနိမ့်ဖက်ဦးတည်လာလိုက် လူ့ဖန်တီးမှုစွမ်းအားနှင့်ပြန်ခုန်တက်သွားလိုက်ဖြင့် ကြမ္မာရဟတ်တန့်စေခဲ့သည်ကို မျက်မှောက်ပြုနေကြရသည်။
ယခုခေတ်၏နည်းပညာ၊ စက္ကောမ ယန္တရားအတတ်သည် ကုန်ပစ္စည်းတို့ကို တိကျသေသပ်များပြားစွာထုတ်ပေးနိုင်၏။ ဤသို့ဖြင့်လူသားတို့၏လူနေမှုဘဝ အဆင့်ဆင့်မြင့်ခဲ့ပြီ။ အဆန်းဆန်းအပြားပြားတီထွင်ဖန်တီးနေရင်း ဈေးကွက်စီးပွားရေးအရပြိုင်ဆိုင်ကြရပေရာ လူသား၊ ဖိုမတို့၏အခြေခံလိုအပ်ချက်တို့ကို ကျော်ချင်တိုင်းကျော်မူ၍ ဇိမ်ခံ၊ ထိုမှလွန်ရန်မရှိဖြစ်ကုန်သည်။ ရှေ့မြင့်တက်ရန်လမ်းတို့ လျှော့နည်းပါးလျှလာပြီဟူလို။
သို့ဆိုသော်.. “အဖို+အမ”တွင”်ဖို+ဖို”၊”မ+မ”တို့၏လူ့ဆက်ဆံရေးသစ်တည်ဆောက်သည်ရှိသော် အဘယ်သို့ဖြစ်လာအံ့သနည်း?
တွေးကြည့်ပါလေ။ ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော ဈေးကွက်သစ်နှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းသစ်များကိုမြင်ကြရဟန်ရှိသည်။ ကျားကျား၊မမ အတွက်ကုန်ပစ္စည်းသစ်များထုတ်ကြရသည်ရှိသော် အနာဂတ်ကမ္ဘာ၏ လူ့ယဉ်ကျေးမှုတို့ဘယ်သို့ဖြစ်ပါမည်နည်း?
ထိုအခြေအနေကိုအခွင့်ယူကာ လိင်တူလက်ထပ်ခြင်းခွင့်ပြုသည့်ပြည်နယ်များအလျှိုလျှိုထွက်လာသည်။ အမေရိကားသည် ကြမ္မာရဟတ်အပေါ်စီးရောက်ရန်အားထုတ်ပြန်ပြီလော။ “ဆဋ္ဌမလှိုင်း”ပေလော။
အိနိ္ဒယယဉ်ကျေးမှုလွှမ်းလွန်သော လောကနီတိ၊မဃဒေဝတို့တွင် ဣတ္ထိယကို နှိမ်ချမှုများမြင်သာသည်။ LGBT များမူကားဆိုပြဖွယ်ပင်မရှိ။ မဂ်တရားကို ထိုးထွင်း၍ မသိနိုင်သူ (၁၅) ဦးတွင် ပဏ္ဍုက်၊ဥဘတောဗျည်းကို ထည့်သွင်းထားပေသည်။
မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအရတိုက်ယူခဲ့သောသခင်မများ၏ နှောင်းအလွန်ခေတ်တွင် မိန်းမတို့အခွင့်အရေးများလွန်စွာမှကျဆင်းကုန်သည်ကို သတိထားမိသည်။ မဆလခေတ်လွှတ်တော်ထဲတွင် အမျိုးသမီးအမတ်အရှားသည်။ စစ်သည်စစ်သားရာထူးကြီးများတွင် စစ်သမီးမရှိ၊ ရဟန်းတွင် ရဟန်းမ(ဘိက္ခူနီ)မရှိ၊
မြန်မာပြည်ဥပဒေအရ ယောက်ျားသည် မယားပြိုင်ထားနိုင်နေသေးသည်။ မိန်းမတယောက်ထက်ပို၍တရားဝင်ယူနိုင်နေသည်။ ယခုအခါတွင်မူ အမျိုးသမီးတို့၏ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းကိုပင်ထိန်းချုပ်မည်ဖက်ဦးတည်သည့် ဥပဒေတို့ပြုရန်အားထုတ်နေသည်ပင်ရှိလာပြီ။
ကွမ်းတရာရေတမှုတ်နှင့်ထမီကြိုးတန်းအောက်သွင်းလျှင် ယောက်ျားတို့ဘုန်းမာန်ကျဆုံးသည်ဟု ဓလေ့ပုံပြင်တို့ကဆိုထားလေသည်။
မြန်မာပြည်တွင်ဂေးများသည် အခြားနိုင်ငံများနှင့်မတူ လိင်တူအချင်းချင်းပုဂ္ဂလိကဆန်စွာ တဦးချင်းချစ်ကြင်ကြယုံမဟုတ်၊ လိင်တူများ(များ)ကိုစ်ိတ်ဝင်စားကြသည်။ လိင်တူချင်းစိတ်ဝင်စားမှုမှ လိင်စိတ်ကြွမှုဖက်ကိုအာရုံပြုအားသာကြကုန်၏။
ကျား၊မ၊LGBTတို့သည် အပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် လေးစားသမှုရှိသင့်သည်၊ အိန္ဒြေရှိရမည်၊ ရှိမှသာ တရားဝင်ဖြစ်မှုနှင့်ရပ်တည်ခြင်းဖက်ဦးတည်သွားနိုင်မည်။ အဆိုပါအချက်ကို မြန်မာဂေးများမှ စည်းစောင့်လျှင် မြန်မာသည်ကမ္ဘာတန်းဦးဆောင်အဆင့်မြန်စွာရောက်သွားနိုင်သည်ကို နှစ်စဉ်တောင်ပြုန်းပွဲတော်နှင့် အလှဒီဇိုင်းဖန်တီးဈေးကွက်ကြီးတွင် ဂေးများအုပ်စီးထားနိုင်မှုက ထင်ရှားပြနေသည်။
ကျားကျား၊မမဆိုသည်နှင့် မေထုန်သံဝါသမှုကိစ္စချည်းမဟုတ်မူပဲ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်း၊ လူနေဘဝတိုးတက်မှု ဘာသာရေး နိုင်ငံရေးများအထိထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ကြပေသည်။
“အခြောက်”ဟူသည်နှိမ့်ချခြင်းသဘောပါ၍ ကမ္ဘာသုံးတိုက်ရိုက်ဖြစ်သော “ဂေး”ကိုသုံးခြင်းဖြင့်နှစ်သိမ့်ပေးရာရစေနိုင်သည်။ မကြိုက်လျှင်မသုံးကြရန်သာဖြစ်၏။
လိင်တူလက်ထပ်ခြင်းကို ဥပဒေအရတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုပါလျှင် အမွေခွဲဝေကိစ္စ၊ အခွန်အခဆောင်ခြင်းကိစ္စ၊ အာမခံကိစ္စ၊ နောက်ဆုံးနိုင်ငံသားပြုခြင်းဖြစ်ခြင်းကိစ္စတို့အထိသက်ရောက်ပါသဖြင့် သတိကြီးစွာကိုင်တွယ်သင့်လှပေသည်။
“မိန်းမ မဝင်ရ” စာတန်းများအားဖြုတ်ချပါ၊ မယားပြိုင်ဥပဒေတို့ရုတ်သိမ်းပါ။ လွှတ်တော်၊နိုင်ငံရေးတွင် အမျိုးသမီး၊LGBT များအား ရာခိုင်နှုန်းမျှနေရာပေးပါ၊ ဓမ္မတာနှင့် ဆန့်ကျင်၍ ကာမစပ်ယှက်ခြင်း ပုဒ်မ (၃၇၇) ကို ပြင်ဆင်ပါ။
လူသည်လူသာဖြစ်ပါသည်။ လူသား၏တန်းတူညီမျှမှုကိုအလေးထားပါလျှင် အခြေခံဥပဒေတွင်ပြဌာန်းထားပါလျှင် ဣတ္ထိယနှင့် လိင်တူချစ်သူတို့အားလည်း တဦးချင်းစီကို အသိအမှတ်ပြုပေးရပေမည်။ ခန္ဓာဖွဲစည်းပုံနှင့်ဟိုမုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့် ပြင်ပသဏ္ဍန်းအားဖြင့်မည်သို့ဖြစ်နေပါစေ ရုပ်ခန္ဓာ၊ အဝတ်အထည်အရောင်အသွေး၊ ယူနီဖောင်း အသားအရောင်တို့နှင့်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုကြစေလို။
(ကံ)အလုပ်နှင့် သူ၏အကျိုးအပြစ်များကိုသာကြည့်၍ဆုံးဖြတ်ကြစေလိုသည်။ ။
သင်ပုန်းထဲပါတဲ့.. The Schumpeter Cycle အကြောင်းပုံလေးပါ..။
အနော် လိုက်မှီအောင်ကို မဖတ်နိုင်တာ။
ပို့(စ) ထဲမှာ ပါပုံအရတော့ “ကျားကျား၊မမဆိုသည်နှင့် မေထုန်သံဝါသမှုကိစ္စချည်းမဟုတ်မူပဲ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်း၊ လူနေဘဝတိုးတက်မှု ဘာသာရေး နိုင်ငံရေးများအထိထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ကြပေသည်။” တဲ့။
အနော်တို့ ဆီမယ် ရှေ့က တစ်ချက်ကိုပဲ မူတည်ပြီး ကျားကျားမမ ခွဲခြား နေသလိုဖြစ်နေတယ်။
စဉ်းစားကြည့်ရင် ဂေးဆိုတာ ကို ခွဲခြားဆက်ဆံတယ် ဆိုတာလည်း ဒီ အချက်ကို မူတည်ပြီး ခွဲခြားသလိုပဲ။
အာ့နဲ့ အဆုံးစွန် စဉ်းစားကြည့်တယ်နော့။
မိန်းကလေးဆိုတာ နာဖက်တို့ ခံဖက်တို့ ဘာလို့မြန်း ထွစ်ဒစ်ရှယ်နယ်လီး စဉ်းစားကြပါလိမ့်လို့။
သားအိမ် လေ။ သားအိမ်။
သားအိမ်ရှိလို့ အဖေမပေါ်ပဲ ကလေးမွေးပြီး၊ လင်ကောင်မပေါ်ပဲ ဘိုက်ကြီးရတာ။
အာ့ကြောင့် မိန်းကလေးကို အပြစ်တင်၊ သမီး မိန်းကလေး မလိုချင်တဲ့ ခေတ်တွေရှိခဲ့တာနေမှာ။
ပြီးတော့ မိန်းမ တန်ဖိုးကို အဲဒီ တစ်နေရာနဲ့ တိုင်းတာတာက အစဉ်အလာလိုကိုဖြစ်နေရော။
နောက်ပိုင်း ဆေး ပြင် ညာ (နော့ထ ပညာ) တိုးတက်လာပုံနဲ့ ဆို အသစ်ကြိုက် မောင်မင်းများ အညာမိမှာ ကြောက်ရပြီ။
ပြောတာ ရိုင်းသွားရင် ခွင့်လွှတ်ပါ။
အနော် ဒီနေ့ စိတ်နောက်နေလို့။
သဂျီးဦးခိုမ်.. ခီဗျားကို ကျုပ်သတ်မယ်……
US မှာဆိုရင် လူမည်းလူဖြူ ခွဲခြားတာကို လူမည်းတွေက မီးကုန်ယမ်းကုန် တိုက်ခဲ့တယ်နော်။ သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင် လူမည်းတွေက ရွံစရာကြီး။ မဲမဲသဲသဲ ပြဲပြဲရွဲရွဲကြီးတွေဆိုတော့လေ။ ဒီတော့ သူတို့နဲ့ ဘယ်လူဖြူက တန်းတူနေချင်မှာလဲ။ ဒါနဲ့တောင် အခွင့်အရေး တန်းတူဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ မြန်မာပြည်မှာက ယောက်ျားတွေက လူဖြူ လို မဟုတ်၊ မိန်းမတွေကလည်း မဲမဲသဲသဲ ပြဲပြဲရွဲရွဲကြီးတွေ မဟုတ်ဘဲ ခွဲခြားမှုရှိနေတယ်။ မြန်မာပြည်ဟာ မိန်းကလေးကို တန်ဖိုးထားသလိုနဲ့ တကယ်က လုံးဝတန်ဖိုးမထားဘူး။ အမျိုးသမီးကို တကယ်တန်ဖိုးထားရင် တစ်လင်တစ်မယား ဥပဒေ ပြဌာန်းပါ။ မယားပြိုင် ဥပဒေကို ရုတ်သိမ်းပါ။ ကုသလတွေ မိန်းမတအားယူပြီး လူမျိ ုး ဝါးမျိုမှာကြောက်ရင် တစ်နိုင်ငံလုံး တပြေးညီ တစ်လင်တစ်မယားဥပဒေ ပြဌာန်းပါလား။ ခုတော့ ကိုကိုဝီ ရွှေဉာဏ်တော် စူးရောက်နေတယ်။
သဂျီး ပြောတာ အားလုံးထောက်ခံတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုပဲ ။ ပုဒ်မ ၃၇ရ ဆိုတာကို မသိပါ။
အခြေခံအကျဆုံး လူ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ယောက်ျား မိန်းမ တန်းတူ အခွင့်အရေးရတဲ့နေ့ဟာ တိုင်းပြည် တိုးတက်မှုလမ်းပေါ် ရောက်တဲ့နေ့ပဲလို့ ယုံပါတယ်။
ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၇ရ သည် သဘာဝမကျသည့် လိင်ဆက်ဆံမှုပြုခြင်း ယောကျာ်းအချင်းချင်း ပြုကျင့်ခြင်း ၊ တိရိစာ္ဆန်နှင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းတို့ကို ကျူးလွန်ပါက ထောင်ဒဏ် တသက်တကျွန်းဖြစ်စေ၊ ၁ဝ နှစ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ထောင်ဒဏ်နှင့် ငွေဒဏ် ၂ ရပ် စလုံးဖြစ်စေ ချမှတ်နိုင်သည့် ဥပဒေတခု ဖြစ်သည်။
လူမည်းက.. လူတွေရဲ့ပင်ရင်းအာဖရိကကဖြစ်တာမို့.. လူ့အော်ရီဂျင်နယ်လို့ဆိုရမယ်..။
ခန္ဓာအရအားအင်ပိုရှိပြီး ..အသားမည်းတာက.. အခုလိုနေရောင်ပြင်းပြင်းစူးကျလည်း.. အရေပြားက.. သာမန်လူတွေထက်ပိုခံနိုင်တယ်ဖတ်ဖူးတယ်..။
မျက်စိထဲ ကင်မ် ကာဒါရှီးယန်းဂျီး ကိုတန်းကနဲမြင်တော့တာပဲ။
. သဂျီးမင်းမိန့်ကျားတဲ့ ကမ္ဘာ့ ယောက်ျားမိန်းမ အခွင့်ရေးနှင့်
. မြန်မာ့အမျ ိုးသမီးများ မိမိတို့အောက်ပေါက်ကို
. ဖုံးဖုံးများရေးဆွဲတဲ့ ဥပဒေမှာ မှတ်ပုံတင်ပြီးမှ သုံးစွဲခွင့် ဥပဒေ
. မည်သို့ ဆက်စပ်တယ်ဆိုတာ အကျယ်ရှင်းပျပေးဇေလိုဘါဒယ်ခင်ဗျား
. နှစ်သစ်မင်္ဂလာပါ သဂျီးမင်း နှင့် ရွာသူရွာသား လိင်တူချစ်သူများခင်ဗျား
၁. လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီးဟာ ဟိုးအရင်ကထက်စာရင် ပိုယဉ်ကျေးလာပြီ ပိုအဆင့်အတန်းမြင့်လာပြီ ဆိုပေမယ့် တကယ်ရင့်ကျက်တဲ့အဆင့်ရောက်ဖို့အများကြီးလိုနေသေးတယ်ဗျ.. စစ်ဆိုတာမကောင်းပါဘူးပြောကြပေမယ့် တိုက်နေရတုန်းပဲ၊ လူတန်းစား၊ အသားအရောင်၊ ကျားမ အဆင့်အတန်းခွဲတာ မရှိသင့်ဘူး ဆိုပေမယ့် အများကြီးကျန်နေသေးတယ်.. ဆိုတော့ အဝေးကြီးလိုပါသေးတယ် ပေါ့ဗျာ..
၂. ကျား၊မ ဆိုတာ biology အရကိုမတူတော့ အတူတူတော့သတ်မှတ်လို့မရဘူး.. စသန္ဓေတည်ကတည်းက chromosome XY နဲ့ XX မတူတော့ ခန္ဓာ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဦးနောက်အလုပ်လုပ်ပုံတွေလည်း မတူကြဘူး.. (ယျေဘူယျအနေနဲ့) ကျားတွေ ရဲ့ အတွးအခေါ်၊ တီထွင်နိုင်စွမ်း၊ စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းက သာတယ်.. အတွေးအခေါ်ပညာရှင်၊ သိပ္ပံပညာရှင်၊ နယ်ပယ်အသီးသီးက Pioneer တွေ မှာ ကျားတွေက လွှမ်းမိုးတယ် (ဒါကြောင့်လည်း superior being ဆိုပြီးသွေးနထင်ရောက်ကြတာဖြစ်မယ်).. ဒါပေမယ့် မ တွေမှရှိတတ်တဲ့ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးတွေ၊ အနစ်နာခံနိုင်မှု၊ သတ္တိတွေ ဟာ ကျားတွေထက်သာပြန်ရော.. ခြုံပြောရရင်တော့ မတူတဲ့အတွက် ကွဲပြားနေမှာ၊ ခွဲခြားခံနေရမှာပဲ ဖြစ်တယ်.. ဒါပေမယ့် ဒါဟာ မတူလို့ ခွဲခြား (တတန်းထဲ) တာပဲဖြစ်သင့်ပြီး အထက်အောက် ခွဲခြားတာမျိုး မဖြစ်သင့်ဘူး လို့ပဲပြောချင်တယ်..
၃. ဂေး ဆိုတာလည်း သိပ္ပံနည်းကျပြောရရင် ကျား၊မ တို့နဲ့မတူတဲ့ အရည်အသွေး၊ အားသာချက်၊အားနည်းချက်တွေ ရှိနေမှာပဲ.. ဒါကြောင့် သူ့နေရာနဲ့သူအောင်မြင်နေကြသူတွေရှိတာပဲ.. သူတို့ကို တန်းတူသတ်မှတ်ဖို့ကတော့ တချို့လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ ပြဿနာမရှိပေမယ့် တချို့နေရာတွေမှာတော့ ကျားမ အဆင့်မခွဲဖို့တောင် အနိုင်နိုင်ဆိုတော့..
၄. နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ကျား ကျား ခြင်း၊ မ မ ခြင်းတောင် အတူတူမဖြစ်သေးဘူးဗျ..